Ny vokatra jiro LED hiditra amin'ny tsenan'i Japana - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
an-trano > Vaovao momba ny indostria > Vokatra LED jiro hiditra amin'ny tsenan'i Japon
Voalohany, fenitra fanamarinana jiro LED Japon
Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny Te, Japon dia tsy misy fari-pitsipika fiarovana sy fanamarinana azo antoka momba ny jiro LED. Ny fikambanan'ny mpamokatra jiro elektrika ao Japon dia nanomana fenitra indostrialy Japon (JIS) ho an'ny fiarovana ny jiro LED momba ny angon-drakitra tany am-boalohany, saingy amin'ny taona manaraka vao homena. Amin'izao fotoana izao, ny jiro LED maivana dia nibodo ny tsena iray manontolo, antomotra ny fampidirana ny fenitra jiro LED, ny orinasa any ivelany izao te-hiditra amin'ny tsenan'i Japon dia mety manondro ireto fenitra fanamarinana roa manaraka ireto.
1, fanamarinana JIS (fenitra indostrialy Japon)
Ny fanamarinana JIS dia lalàna mifehy ny indostria nasionaly ary fenitra ekena sy an-tsitrapo. Ny fenitra fanamarinana JIS amin'ny fomba fandrefesana dia mila manamarina ny isa maodely, ny refy, ny fiasa ary ny lafiny azo antoka amin'ny vokatra. Raha ny kalitaon'ny vokatra mifanaraka amin'ny fenitra JIS ho an'ny toky kalitao dia azo apetraka tsara amin'ny tsenan'i Japon. Ny tsena any ivelany dia firenena 12 sy faritra 12 izao no mampiasa fenitra fanamarinana JIS: Korea, Korea Avaratra, Taiwan's China, China, Indonesia, Filipina, Myanmar, Thailand, ary Vietnam, Malaysia, Malaysia sy Mexico.
2, fanamarinana PSE
Te hiditra amin'ny tsenan'ny orinasa elektrika any Japon, ny fiarovana ny PSE dia fanamarinana tsy maintsy atao. PSE dia manana karazana marika fanamarinana 2: marika fanamarinana ny PSE Diamond (tsy maintsy atao) ho an'ny vokatra voafaritra, ny marika PSE Circle (an-tsitrapo) dia ampiasaina amin'ny fanamarinana vokatra tsy voafaritra. Ary io fanamarinana io dia i Japon irery ihany no miantsoroka ny andraikitry ny mpanamboatra na ny mpanafatra, fa tsy ny mpanamboatra ivelany, any Japon ny fanamarinana tena henjana ary manana laza avo.
:Indostrian'ny jiro LED nateraky ny "blowout" tamin'ny tsena avo